အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက် - Afrikhepri Fondation
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်၊
ပါဝင်ပစ္စည်းများ couscous ၏ 400 ဂရမ် (အထူးဂျုံ semolina) ထောပတ်၏ 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 200 ကုလားပဲ ၂၀၀ ဂရမ် (မနေ့ကစိမ်) ကြက်တစ်ကောင်သည်အပိုင်းပိုင်း ၈ ပိုင်းခွဲပြီးလျှင်သိုးမ၏ခြေထောက်ဂရမ် ၅၀၀ ...
တစ်ဦး Yassa ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နာမည် - yassa ဇာစ်မြစ် - ဆီနီဂေါအမျိုးအစား - အသားပါဝင်ပစ္စည်းများ - အမဲသား၊ နွားမ - ငရုတ်ကောင်း - ခရမ်းချဉ်သီး - ဂျင်းလူအရေအတွက် - ၄ အဘိတ် - ၁၅ မီလီမီတာချက်ပြုတ်ခြင်း - ၆၀ မီလီယံပါဝင်ပစ္စည်းများအသား ၇၀ ဂရမ် ...
ဆီနီဂေါနိုင်ငံစားဖိုမှူး၊ စာရေးသူနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသံအမတ် Pierre Thiam ကအမေရိကတိုက်၏အစားအစာသည်အာဖရိက၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ကျွန်များသတိရအောက်မေ့ပွဲနေ့နှင့် ...
ရိုးရှင်းသောအာဖရိကဟင်းလျာများကိုချက်ပြုတ်ရန်လေ့လာပါ။ သောကြာနေ့တိုင်းဥနိတ်နှင့်ရော့စတန်သည်သူတို့၏မီးဖိုချောင်တံခါးများကိုဖွင့်ပြီးသင့်အားဗီဒီယိုအသစ်များဖြင့်ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်များကိုပြသသည်။ https://www.youtube.com/watch?v=La-VVmU6ki8&list=UUw3Hhwdhwsghu14S4mVZNqg&index=1
တစ်ဦး Thiebou Dieune ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နာမည် - Thiebou Dieune မူလအစ - ဆီနီဂေါအမျိုးအစား - ငါးနှင့်ဆန်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ဆန် - မုန်လာဥ - ဂေါ်ဖီထုပ် - အာလူးချိုသောလူအရေအတွက် - ၆ အဘိတ် - ၃၅ သန်းဟင်းချက် - ၅၀ မီလီယံပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁ ကီလိုဂရမ် ...
တစ်ဦး tagine ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူလေးယောက်အတွက်ချိုမြိန်မြိန်မြံသောအညစ်အကြေးများ။ (မော်ရိုကို) ပါဝင်ပစ္စည်းများ -4 ကြက်သား (ဖြစ်နိုင်လျှင်လယ်သမား) -1 သေးငယ်သောပါးလွှာသောကြက်သွန်နီ ၂ Tsp ။ မြေပဲဆီ -2 Tsp ။ ၏ ...
တစ်ဦး Thiebou Yapp ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဇာစ်မြစ်၊ ဆန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလူအရေအတွက် - ၄ အဘိတ် - မိနစ် ၃၀ ချက်ပြုတ်ခြင်း - မိနစ် ၉၀ ပါဝင်ပစ္စည်းများဆန် ၃ ခွက်၊ အနံ့အရသာရှိသောဆီ4ml ဆီ ...
Soupou Kandja ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နာမည် - Soupou Kandja မူလအစ - မာလီ၊ ဆီနီဂေါပန်းကန်အမျိုးအစား - အသားပါဝင်ပစ္စည်းများ - အုန်းဆီ၊ အသား။ လူအရေအတွက် - ၄ အဘိတ် - ၃၀ မီလီယံချက်ပြုတ်ရာ - ၉၀ မီလီယံပါဝင်ပစ္စည်းများအမဲသား ၃၀၀ ဂရမ်အတွင်းဖြတ်တောက်ထားသော ...
ဆီ၊ ဆီနီဂလီလူမျိုးများအသုံးပြုသောဟင်းရည်များသည်ဟင်းချက်ရာတွင်ခြားနားမှုပြုလုပ်ရန်ချက်ပြုတ်ကြသည်။ Dolli၊ Magi nokoss၊ ဒါ ...
1 ၏စာမျက်နှာ3123 အောက်ပါ